ओहो पानीजहाज ! "साँच्चै मेरो देश धेरै नै विकाश भईसकेछ !!"
Sun, May 31, 2020 at 10:07am
बिहिवार, २ फागुन २०७५,	शशिशेखर घिमिरे.	1.09K
नेपालीहरुको लागि पानी जहाज एक सपना बन्दै आएको थियो । त्यसो त भूपरिबेष्ठित देश नेपालमा समुन्द्रबिना नै पानी जहाज चलाउने सपना देख्नु त्यति जायज पनि थिएन् । तर 'तँ चिता म पुराँउछु' भन्ने उखानको चरितार्थ हुनेगरि यतिबेला पानी जहाज कार्यालयकै उद्घाटन भएको छ ।
यो संगै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले अब भने देशमा पानी जहाज नै चलाँउछ कि भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक हैन । सरकारले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको खबरले तीन करोड नेपालीको हृदय खुशीले तरंगित भएको हुनसक्छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले एकान्तकुनमा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि उपस्थीत सबैले ताली बजाए । खुशी साटासाट गरे । सञ्चारमाध्यमले समाचार संकलन गरे । क्यामेरापर्सनले दुश्य कैद । देश बिकासको द्रुत गतिमा दौडिरहेको छ भन्ने यो एउटा प्रमाण पनि हुन सक्छ । किनकी मुलुकमा विकासका धेरै जस्तो कार्यहरु लगभग सकिसकेको छ ।
सडक, पुलपुलेसो ,बाटोघाटो,अस्पताल आदि ईत्यादी बन्न पर्ने चीज केहि छैन । बाटोघाटोको अभावमा जनताले कष्टकर यात्रा गरेर अनाहकमा कुनै समय मुत्युबरण गर्थे अव अवस्था कहाँ त्यस्तो रह्यो र ? किनकी देशका सवैस्थानमा सहज किसिमले मोटरबाटाको पहँुचमा जनता पुगीसकेका छन् । कुनै समय एउटा सिटामोल किन्न लामो दूरी पार गर्न पर्ने अवस्था पूरापूर फेरिएको छ ।
देशको कुनै पनि स्थान र भूगोलका जनता सहज स्वास्थ्य सेवाको पहँुच बाहिर छैनन् । सरकारले सवै स्थानमा सहज स्वास्थय सेवा पाईने अस्पताल खोलीदिएको छ । ति अस्पतालमा कुनै समय चरम बेरोजगारीको अवस्थामा रहेका डाक्टर नर्सहरुले रोजगार पाएका छन् । त्यति मात्र हैन कामकै लागि परदेशीएकाहरु समेत स्वदेशकै अस्पतालमा सेवा गर्ने मन बोकेर फर्किसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले पानीजहाजको कुरा गर्दा खाल्डोमा कागजको जहाज बनाएर उल्लाईयो
उता सुत्केरी व्यथाको प्रश्रव बेदनामा छट्पटिएर मर्न बिबश आमाहरुको समाचार भेटिनै मुश्किल छ । थप उपचारको लागी लाखौं ऋण गरेर राजधानी शहर आउन पर्ने नियती छैन । बिज्ञान र प्रविधीको प्रचुर प्रयोगकै कारण हिजोसम्म विकासमा बामे सरिरहेको नेपाल आज पानी जहाज गुडाउने योजनामा पुगिसकेको छ । पानीजहाज कार्यालय खोल्न सक्ने भएको छ ।
कुनै समय काम गर्नकै लागी दोश्रो दर्जाको नागरिक बनेर विदेश धाउन लालयित युवाहरुको अवस्था फेरिएको छ । देश बिकाससंगै म्यानपावर कंम्पनीहरु धराशायी हुनपुगेका छन् । सोझासाझा जनतालाई दोव्वर असुलेर विदेशमा सस्तो श्रम गराउन पठाउनेहरुको चिल्लीबिल्ली भएको छ । सरकारले देशभित्र नै कृषि , उद्योग स्थापना गरेर थुप्रै बेरोजगार युवालाई रोजगार दिईसकेको छ ।
यो संगै ४० कटेसी रमाउने सपना साँचेर परदेशमा आँसु बगाउनेहरुको खुशी घरदेशमै देखिन थालेको छ । कुनै समय रेमिट्यान्सले निर्भर अर्थत्रन्तलाई स्वदेशकै काम गर्ने कर्मजीवि पाखुरीहरुको मिहीनेत र पसिनाले थप मजवूत बनाउदै लगेको छ । आर्थिक रुपमा सक्षम हुने आधार दिएको छ । देशका पर्यटकीय संभावना भएका कतिपय क्षेत्रहरुको विकास गरेर आर्थिक रुपमा सबल बनाँउदै लगेको छ ।
भए गरेका नदिनाला मार्फत बिजुली उत्पादन गरेर भारत लगायत दक्षिण एशियामै बेच्न सफल भएसंगै देश विकासको रफ्तारमा अघि बढीरहेको छ । त्यसैले त विकासको दुष्टिकोणेले परिपूर्ण र भरिपूर्ण भएपछि सरकारले पानी जहाज सपना पूरा गर्न लागिपरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहनेगरी कार्यालय उद्घाटन भएको छ ।
यसअघि २०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय भने स्थापना भएको थिएन । किनकी त्यतिबेला मुलुक राजनीतिक संक्रमणले थिल-थिल थियो । त्यति मात्र हैन परिवर्तनको लागि १२ बर्षे सशस्त्र द्वन्दको मारमा देश र जनता रहँदा हामी धेरै पछि परेका रहेछौं भन्ने अहिले आएर महशुस हुन थालेको छ । किनकी मुलुक समृद्धिको यात्रा तर्फ उन्मुख भएर पानी जहाजको कोरा कल्पनामा डुबुल्की मार्दै छ ।
कुनै सयम चीन र भारतले गरेको विकासको संरचना हेरेर कल्पिएका नेपालीहरुको अवस्था अब हिजो जस्तो छैन । पूर्वपश्चिम रेल कुदेको त बर्षौ भयो । सबै विकासे योजनाहरु पूरा भएपछि विकास गर्ने तीव्र योजना अनुसार पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन भएको छ । त्यही पानी जहाज चढेर तपाई कुनै दिन एशिया मात्र कहाँ हो र यूरोप र अमेरिका पनि पुग्नु हुन्छ कि ? जे होस् मुलुकमा छिट्टै पानी जहाज चल्दैछ । धन्य सरकार तिमी छौं र पो हामी जनता छौं । 'हामी जनता र देश नै नभएको भए तिमीले कस्को लागी बिकास गथ्यौं होला' भनेर सोच्दासोच्दै भुसुक्कै निदाएछु । बिहान ४ बजे नजिकै राखेको मोवाईलको अर्लाम टोनको घण्टी बजेपछि पो झल्याँस भए , साँच्चै मेरो देश धेरै नै बिकास भईसकेछ ।
यसअघि २०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय भने स्थापना भएको थिएन